Amangcwaba ezilwanyana, ubugcisa bukaStephen King. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, iintlobo, Inoveli, Uloyiko
Ingcwaba likaStephen King lezilwanyana, ubugcisa obuvela kwimovie entsha esekwe kule ncwadi.
Amangcwaba ezilwanyanaPet Sematary, ngesiNgesi) yinoveli epapashwe ngo-1983 ibhalwe ngu inkosi enkulu yoyikiso uStephen King. Ngokutsho kombhali, ongoyena uphambili kolu hlobo loncwadi, yeyona ncwadi yakhe yoyikisayo, njengoko inezinto ezibonakalayo ezinika imbonakalo ethembekileyo necacileyo.
Le ncwadi iyakwazi ukuhambisa ezona mvakalelo zimnyama zomfundi, kuba ikakhulu ijongana noloyiko lokufa kwaye yintoni abantu abanokuyenza ukwenza ukugcina abantu ababathandayo bephila, ngaphandle kweziphumo. Nditsho nezona zoyikekayo kufanelekile, ngokutsho kwe-protagonist, ethi iqale i-adventure egcwele ubundlobongela ukubuyisela oko ubomi buthathe kuye ngokwemvelo.
1 Malunga nomxholo
2 Obona balinganiswa
3 Malunga iyelenqe
Lo msebenzi wobugcisa woyikekayo ubekwe kwidolophu yaseLudlow, eMaine, apho uLouis Creed — ophambili—, inkosikazi yakhe uRachel, abantwana babo uEileen noGage, kunye nekati yabo, uWinston Curchill, bafika ngolindelo ukuza kufumana ikhaya elitsha losapho. Le yokugqibela yipropathi entle yekoloniyali ekuHola wendlela 15 ejikelezwe bubuhle behlathi. Nangona kunjalo, ngaphaya kwemithi eshinyeneyo kukho amangcwaba amadala ezilwanyana aqala ukuphazamisa iiNkolelo.
Emva kwexesha usapho luya kufumanisa ukuba kukho enye into engaphaya, enzulu ehlathini., into ekufuneka bayoyike: ingcwaba lamandulo lama-Amerindiya elibuyisa abantu ekufeni. Le ndawo ijika izinto ezingcwatyelwe apho zibe zizidalwa ezonakeleyo, ezingasekhoyo ezishiya uthotho lwezinto ezoyikisayo njengoko zidlula kwihlabathi labaphilayo.
Isivumo sokholo sikaLouis: intloko yosapho, kunye nentloko entsha yeyeza kwiYunivesithi yaseLudlow. Ekuqaleni kwesakhiwo yindoda yesayensi, inyanisekile kwaye izolile, izimisele ukukhathalela ilungu losapho lwayo kwaye ibabonelele ngokhuseleko abaziva beludinga. Kodwa xa kwenzeka ezona ziganeko zoyikekayo, uya kuba nakho ukwenza izinto ezinobungozi kunye nenkohliso.
Umgaqo kaRachel: Umama oqhelekileyo waseMelika, ngemfihlo ephazamisayo eyaphawula ubuntwana bakhe ngonaphakade kwaye washiya kuye ukungakwazi okungapheliyo ukwamkela ukuphulukana neemvakalelo, kudala ukoyika ukufa.
Isivumo sokholo sikaEileen: Uneminyaka emi-5 ubudala, uyintombi endala kunazo zonke zeNkolelo. Unobuntununtunu kwaye unengqiqo kakhulu, akwazi ukuqonda ezona mvakalelo zinzima zabantu abadala amaxesha amaninzi.
Isithuba: Ungunyana omncinci wenkolelo, uneminyaka emi-2 kuphela. IGage intle kwaye ihlala yenza uLouis acinge ukuba uya kuba ngumfana onesiphiwo, ngenxa yobukrelekrele bakhe bokuqala.
UJudson Crandall: UJud ngummelwane osele ekhulile oneenkolelo, othi abe ngumhlobo osenyongweni noLouis, kwaye okokugqibela kuye kumqwalasele njengomntu ongutata. Le ndoda yabantu ngulowo unika uLouis ulwazi oluyimfuneko ukuze akhuphe imicimbi yesiqhelo ebaliswa kweli bali.
Incwadi yahlulahlulwe yaba zizenzo ezithathu, eyokuqala iyeyona inde. Kuyo umbhali ugxile ekuchazeni abalinganiswa abaphambili neemeko umntu ngamnye ajongene nazo. Iziganeko kunye nokuphendula okwasemhlabeni ngaphandle kwemfihlakalo engachazwanga kwaye kunokwenzeka ukuba uchonge umlinganiswa ngamnye kwaye uvelane nabo.
Isenzo sesibini kukuvusa iimfihlakalo, apho umfundi anokufumana uloyiko lomlinganiswa ngamnye kwaye kutheni ezi zinto zichazwe ngendlela enobuchule yokuba ngamanye amaxesha kuhamba, kugcwele ubungqongqo, kwaye kwabanye kunokuba nzima kwaye kubi. Indlela usapho kunye nokucoceka kwabalinganiswa abawela ngayo ngaphandle kwesi senzo kukukuqhatha.
UStephen King ucaphula.
Kodwa kukwisenzo sesithathu apho umfundi anokufumana uloyiko oluhlaza. Kulapha apho, phantse ngendlela yobugcisa, umbhali eguqula abalinganiswa, etyhila awona macala aqinisekileyo. Njengoko sele sibonile, inoveli yenye yezona zinto zilungileyo zohlobo, hayi ilize lo msebenzi uphakathi kwezona zibalaseleyo zikaStephen King.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » UStephen King Animal Cemetery